ဆွစ်ဇာလန်၏ပုလဲ |5မှခရီးစဉ် * ဇိမ်ခံ Bvlgari Resort ကို
Published by ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီ at မေလ 13, 2019
ခရစ်စတီးနား - ဆွစ်ဇာလန်၏ပုလဲ
Pearls of Switzerland – At the Bvlgari Resort ဒူဘိုင်းဆွစ်ဇာလန်၏ပုလဲအတူစိတ်ဝင်စားဖွယ်အချက်အလက်များနှင့်အံ့သြဖွယ် 24 နာရီ ခရီးစဉ်, ခရီးစဉ်နှင့်ပိုပြီး ...
နောက်ကျောဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအာရေဗျခရီးသွားစျေးကွက် (ATM စက်များ) မှ ဒူဘိုင်းအတွက်အဖြစ်အပျက် ငါအဟောင်းတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးဘယ်မှာများနှင့် မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်နှင့်စီးပွားရေးမိတ်ဖက်.
Rasha Oudeh အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ စီအီးအို CEDEM AG ကဆွစ်ဇာလန်၏။ သူမသည်ခရီးသွားလာရေးဆိုင်ရာစကားပြောဟောပြောသူများနှင့်လက်ဆောင်များကိုပေးသော ATM အမျိုးသမီးများအတွက်ကမကထပြုခဲ့သည်။ Alessandra Alonso ခရီးသွားအမျိုးသမီးထံမှ NEOM ထံမှစာရာ Gasim ကိုဖိတ်ကြားထားပါတယ် ဆော်ဒီအာရေဗျ, Emma Banks မှဒုတိယဥက္ကPresident္ဌ၊ F&B မဟာဗျူဟာနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ဥရောပအရှေ့အလယ်ပိုင်းနှင့်ဟီလ်တန်မှအာဖရိကနှင့်ခရီးသွားအကြံပေးများမှ Andrea Bailey တို့သည်အာရုံစိုက်ထားသောအဖွဲ့တစ်ခုတွင်ပြောဆိုရန် GCC နိုင်ငံများ၌ခရီးသွားနှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းအတွက်မိန်းမတို့အားရရှိနိုင်သောအခွင့်အလမ်းများ, ATM2019 ၏အခါသမယပေါ်မှာ။
စက်တင်ဘာလမှာတော့ကျနော်တို့ဆွစ်ဇာလန်မှာရှိတဲ့ကူဝိတ်ကနေတချို့ခရီးသွားအေးဂျင့်များကြိုဆိုပါတယ်ပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့ဆွစ်ဇာလန်မှာရှိတဲ့မြှင့်တင်ရေးအပတ်အတွင်း featured ခံရဖို့လိုခငျြတဲ့သူစပွန်ဆာရှာကြ၏။ ကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူ touch နှင့်ဌရကျေးဇူးပြုပြီးကျနော်တို့ပူးပေါင်းနိုငျပုံကို et ရဲ့အစီအစဉ်.
ဒူဘိုင်း၌ငါ့နေထိုင်စဉ်အတွင်း, ငါ5* ဇိမ်ခံ Bvlgari Resort ကိုကြည့်ရှုစစ်ဆေးသည်။ ဤ အရပျကိုအိမ်ကနေအိမ်ပြန်ပါ! အဆိုပါ Bvlgari Resort ကိုဒူဘိုင်းမှာ, သငျသညျ, La Vita အီး dolce ဆင်နွှဲနှင့် privacy ကိုခံစားနိုင်ပါတယ်။ ဒူဘိုင်းကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းခရီးသွားလုပ်ငန်းနေရာများထဲကတစ်ခုနှင့်အလွန်အလုပ်ရှုပ်ကြောင်းသတိရပါ။ ဒီနေရာတွင်အနားယူပြီးအချိန်ထဲကယူနိုင်ပါတယ်။
ခရစ်စတီးနားသတင်းလွှာမှ Up ကိုမနာသီချင်းဆိုမည်
24 ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံခရီးစဉ်၏ပုလဲနှင့်အတူနာရီ, ခရီးစဉ်နှင့်ပိုပြီး
အဆိုပါ Bvlgari Resort & Residences ဒူဘိုင်းကနေရှုမြင်
ဆွစ်ဇာလန်၏ပုလဲ - ဒူဘိုင်းအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု၏အကြီးဆုံးသောမြို့ (ယူအေအီး) ဖြစ်ပါသည် ထက်ပိုမို9သန်းပေါင်းများစွာနေထိုင်သူနှင့်အတူ။ အဘူဒါဘီမြို့သည်မြို့တော်၏မြို့တော်ဖြစ်သည် ယူအေအီး။ ငါ 1998 အတွက်ပထမဆုံးအကြိမ်တိုင်းပြည်သွားရောက်ခဲ့သည်။ အဆိုပါမြို့အဆက်မပြတ်စိုက်ပျိုးခဲ့ပြီးအများကြီးကိုပြောင်းလဲခဲ့သည်။ 1833 န်းကျင်ကတည်းကဒူဘိုင်းတစ်ဦးကုန်သွယ်ဆိပ်ကမ်းကိုဖြစ်ခဲ့သည်။ ယနေ့တွင်စီးပွားရေးကုန်သွယ်ရေး, ခရီးသွားလုပ်ငန်း, လေကြောင်း, အိမ်ခြံမြေအပေါ်မှီခိုခြင်းနှင့် ကြီးထွားလာဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှု.
စာနာထောက်ထားရေး၏တစ်နှစ်တာ - နာရီရှိတ်ခါလီဖာဘင် Zayed ကြေငြာ စာနာထောက်ထားရေး၏တစ်နှစ်တာအဖြစ် 2019. အဆိုပါ ကြေညာချက် ယင်း၏တည်ထောင်ကတည်းကသည်းခံစိတ်နှင့်၎င်း၏ချဉ်းကပ်မှုတစ်ခုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမြို့တော်အဖြစ်ယူအေအီးကိုမီးမောင်းထိုးပြနိုင်ရန်ရည်ရွယ်သည်, ပြည်သူများအကြားဆက်သွယ်ရေးတစ်ခုတံတားဖြစ် အစွန်းရောက်ပယ်ချခြင်းနှင့်အခြားများ၏လက်ခံမှုအပေါ်အလေးပေးတဲ့လေးစားမှုပတ်ဝန်းကျင်တွင်ကွဲပြားခြားနားသောယဉ်ကျေးမှုများ။
ဖတ် ဒီမှာ ဒူဘိုင်း၏သမိုင်းနှင့် ပတ်သက်. ။
ဒူဘိုင်း အယ်လ် Maktoum အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ် ဒူဘိုင်းကမ္ဘာ့ဖလားဗဟို ကားဖြင့် (DWC) 45 မိနစ် (အသွားအလာပေါ် မူတည်. ) ဒူဘိုင်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ် ဒူဘိုင်းနိုင်ငံတကာ ကားဖြင့် (DXB) 25 မိနစ် (အသွားအလာပေါ် မူတည်. )
ရှာတွေ့သည် ဒီမှာ မင်းလိုအပ်ရင် ဗီဇာ ယူအေအီးကိုရိုက်ထည့်ပါ
မေလ 2019 ©မူပိုင်ပုလဲ ဆွစ်ဇလန်။ ခရစ်စတီးနား Tschuppert အားဖြင့်စာသားနှင့်ဓာတ်ပုံများကို။
Bvlgari Resort & Residences ဒူဘိုင်း
အဆိုပါ Bvlgari Resort & Residences ဒူဘိုင်း၏ဝင်ပေါက်မှာပြုံးနေန်ထမ်းနွေးနွေးထွေးထွေးငါ့ကိုကြိုဆို ကြှနျတေျာ့ဆိုက်ရောက်အစောပိုင်းနံနက်ပေါ်မှာ။ အဲဒါမှန်ပါတယ် နေရာ တကယ်တမ်းကောင်းမွန်သောဘဝကိုတွေ့ကြုံခံစားခံစားလိုလျှင်။ Bvlgari Resort & Residences Dubai သည်ဒူဘိုင်းကမ်းခြေနှင့်သီးခြားပင်လယ်မြင်းပုံစံ 300 ကျွန်းပေါ်တွင်တည်ရှိသည်။ ဒီမှာကျွန်းငယ်လေးတစ်ကျွန်းပေါ်မှာသင်ခံစားရလိမ့်မယ်။ အပန်းဖြေဖို့တစ်ခုပြီးပြည့်စုံသောကမ္ဘာကြီးကို သငျတို့သဆန္ဒရှိအခါတိုင်းမြို့လယ်၌ဖြစ်ဖို့ option နဲ့အတူတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးကိုခံစား။ သင်တစ်ဦးပုဂ္ဂလိကပြာစိမ်းရေကမ်းခြေနှင့်ဥယျာဉ်ရှာနေနေတယ်ဆိုရင်ဒီ ဒူဘိုင်းမှခရီးသွားသည့်အခါသွားကြဖို့ရာအရပ်။
မစ္စစ်လော်ရာအန်တိုနီ (Assistant Sales) နဲ့မနက်စာစားခဲ့တယ် မန်နေဂျာ - ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်း) လောလောလတ်လတ်ညှစ် လိမ္မော်ဖျော်ရည်, စံပယ်အစိမ်းရောင်လက်ဖက်ရည်, မီးခိုးမုန်နှင့်အတူကြက်ဥဘင်နီဒစ် | ချယ်ရီခရမ်းချဉ်သီး, Taggiasche သံလွင်, Pesto နှင့်အတူကျွဲ Burrata | pancakes, တောရိုင်း Berries ပါ, ငှက်ပျောနှင့်အော်ဂဲနစ်မေပယ်ရည် | Bircher Muesli နှင့်တောရိုင်း Berries ပါ.
ကျနော်တို့ကအဆိုပါသီချင်းဆိုငှက်မြည်သံနှင့်ကျော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင်ခံစားခဲ့ရသည့်ကျယ်ဝန်းလသာဆောင်ပေါ်အပြင်ဘက်တွင်ထိုင်လျက် Bvlgari ရွက်လှေ ကလပ်။ အစားအစာလောလောလတ်လတ်ပြုတ်ပြီးအပြုံးနှင့်အတူတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ အရာအားလုံးပြီးပြည့်စုံသော, ချစ်ခြင်းနှင့်တကွကိုပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါ Bvlgari ဒူဘိုင်း Watch ဗီဒီယို
အိမ်ခြံမြေ၏ Plus အားရမှတ်:
25 မိ။ ဒူဘိုင်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ် DXB မှ။
6 ကီလိုမီတာကနေ Burj Khalifa နှင့်ဒူဘိုင်း Mall က။
Shaikh Zayed လမ်းမကြီးကနေ5ကီလိုမီတာတည်ရှိသည်။
ဟိုတယ်ဧည့်သည်တစ်ဦးက 600m ပုဂ္ဂလိကကမ်းခြေ။
မိသားစု-friendly: Little ကကျောက်မျက်ရတနာကလပ် ကလေးများအတွက်.
အာရဗစ်, အင်္ဂလိပ်, အီတလီ, ပြင်သစ်, ဟိန္ဒူ, ဂျပန်နှင့်အဘိဓါန် Mandarin- စကားပြောန်ထမ်းများ။
အဆိုပါဆုရHōsekiဂျပန်လက်မှတ်စားသောက်ဆိုင်အပါအဝင်6က F & B ကိုဆိုင်များတွင်။
အဆိုပါအပန်းဖြေ 101 ခန်းနှင့်အစုံကမ်းလှမ်း, Superior အခန်းများ, Deluxe သဲသောင်ပြင်ကြည့်ရန်အခန်းများ, ပရီမီယံသမုဒ္ဒရာကြည့်ရန်အပါအဝင် အခန်းပေါင်း , အငယ်တန်း Suites (55 m2), Deluxe Suites (80 m2) နှင့် The Bvlgari Suites (105 m2) (အားလုံးအခန်းပေါင်း 120 m2 ဖြစ်ကြ၏) ။
20 Bvlgari ဟိုတယ်ရေကူးကန် Villas, တဦးတည်း-အိပ်ခန်းကမ်းခြေအမြင်အပါအဝင် Villas (175 m2), Two-အိပ်ခန်းကမ်းခြေအမြင် Villas (250 m2), Two-အိပ်ခန်း skyline အမြင် Villas (250 m2), သုံးအိပ်ခန်း skyline အမြင် Villas (315 m2) နှင့် The Bvlgari ဗီလာ (540 m2) ။ အားလုံး 20 Bvlgari Villas များမှာ တစ်အိမ်မှာအိမ်ကနေ အရည်အသွေးအမြင့်ဆုံးအီတလီဇိမ်ခံပရိဘောဂအမှတ်တံဆိပ်နှင့်အတူအားလုံးအကောငျးဆုံးပရိဘောဂ။
il Ristorante - ပျား Romito
အဆိုပါ Bvlgari ရွက်လှေကလပ်ဒူဘိုင်းစားသောက်ဆိုင်
Bvlgari ချောကလက်ရောမရတနာ၏ "ချောကလက်ကျောက်မျက်" ဖန်ဆင်းခြင်းအဖြစ်လူသိများသည်။ ဒါဟာတစ်နည်း-ဖုံးလွှမ်းအတွေ့အကြုံ အများဆုံးခေတ်မီအာခေါင်ချက်ချင်းအဖြစ်သန့်စင်သော Bvlgari အသိအမှတ်ပြုရန်နှင့်တန်ဖိုးထားလိမ့်မည်။ အားလုံးချောကလက်ချစ်သူများအိပ်မက်များအတွက်! အဆိုပါ Watch ဗီဒီယို
အဆိုပါ Bvlgari Spa ကုထုံးမျက်နှာနှင့်ခန္ဓာကိုယ်ကုသမှု, ထုတ်ကုန်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများပေးပါသည်။ ကုသမှုအတွက်နာရီဖွင့်လှစ်:9နံနက် - 10 ညနေ
spa အဆောက်အဦ:7နံနက် - 11 ညနေ
Bvlgari ထံမှအလှကုန်ထုတ်ကုန်များနှင့် ပင်လယ်ပြင် ၏ဝင်ပေါက်မှာဝယ်ယူနိုင်ပါသည် အလှအပဧည့်ခံအဖြစ်အချို့သော beachwear.
အဆိုပါ Bvlgari အမြင့်ရတနာဖက်ရှင်စတိုး
ရှာဖှေတှေ့ Fiorever - Fiorever ချစ်ခြင်းမေတ္တာတစ်ဦးအခွန်ဆက်ဖြစ်ပါသည်, အသက်တာ၏စိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်ဝမ်းမြောက်ခြင်း။ မစ္စတာမိုဟာမက် Malik Mebar အဆိုပါ Bvlgari ၏ဖက်ရှင်စတိုးလိုင်းအရောင်းအကြံပေးဖြစ်ပါသည် Resort & Residences ဒူဘိုင်း။ သင်တစ်ဦး Fiorever ဝယ်ယူရန်ဆန္ဒရှိပါလျှင်သူနှင့်အတူထိတွေ့ရယူလိုက်ပါ။
အဆိုပါ Bvlgari ဆိုင်
ဒီနေရာတွင်အမှတ်တရပစ္စည်းလက်ဆောင်တစ်ခုအဖြစ် Bvlgari ထုတ်ကုန်ဝယ်နိုင် သို့မဟုတ်ပဲတစ်ခုခုကိုယ့်ကိုကိုယ်အဘို့: စာအုပ်တွေ, ရေမွှေး, ဖယောင်းတိုင်, အဝတျအစား, အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများနှင့်ပိုပြီး။ ထုတ်ကုန်တစ်ခုကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးနှင့်အတူတစ်ဦးက Boutique ။
Bvlgari နှင့်ကို Safe the Children
အကြားဆယ်စုနှစ်ကြာပူးပေါင်းအထိမ်းအမှတ် Bvlgari နှင့် Save the Children, အ Bvlgari Majlis the Children နှင့် Bvlgari သားသမီးရဲ့ပညာရေးကိုထောက်ပံ့ဖို့ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန်ကဆောငျရှကျနေတဲ့ခရီး၏ 10 နှစ်ပေါင်းထင်ဟပ်အထူးပြပွဲ hosting ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ Bvlgari ရတနာဖက်ရှင်စတိုး, La မဲထုတ်ကုန် spa & Fitness စျေးဝယ်အမှတ်တရပစ္စည်းများ။
နယူး Bvlgari ဟိုတယ်ဖွင့်လှစ်ရန်စီစဉ်ထားကြသည်:
အဆိုပါရေတပ်: Maserati, မာစီဒီး, BMW ကားနှင့် Chevrolet
Deira, ဒူဘိုင်းအတွက် Sightseeing
Deira ဟာနယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်ဒူဘိုင်းမြို့ဧရိယာဖြစ်ပါသည် ပါရှန်းပင်လယ်ကွေ့, Sharjah နှင့်ဒူဘိုင်း Creek အဘိဓါန်။
သမိုင်းကြောင်းအရ, Deira ပုခဲ့ ဒူဘိုင်း၏စီးပွားဖြစ်စင်တာ။ ဒါပေမယ့်နောက်ထပ်အဘူဒါဘီဆီသို့ကမ်းခြေကိုဆင်းမှုကြောင့်ရှိတ် Zayed လမ်းနှင့်ဒေသများတလျှောက်တွင်မကြာသေးခင်ကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်လွန်ခဲ့သည့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာသူ့ရဲ့အရေးပါမှုကိုဆုံးရှုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဆိပ်ကမ်း Saeed သေးငယ်တဲ့ဆိပ်ကမ်းဖြစ်ပြီး ဒူဘိုင်း Creek အဘိဓါန်၏ Deira ရဲ့ကမ်းနားတလျှောက်။ ဆိပ်ကမ်း Saeed ဒူဘိုင်းအတွက် dhow Cruise နဲ့အသေးစားရေကြောင်းလှေအချို့ကိုရရှိထားသူဖြစ်ပါသည်။
လာသောအခါဒူဘိုင်းတစ်ဦးမဖြစ်မနေ-ခရီးစဉ်ဒဏ္ဍာရီ Souk ဖြစ်ပါတယ်။ ရာစုနှစ်များစွာအဘို့, ကုန်စည်ခရီးသွားလာ အိန္ဒိယ, အာဖရိကနဲ့အာရှကနေ တလြှောကျ ပိုးလမ်းကြောင်းသည်ဤစည်ကားခရိုင်ကုန်သွယ်ခဲ့ကြသည်။
တစ်ဦးကမဖြစ်မနေ-ခရီးစဉ်ဖြစ်ပါတယ် ရွှေ Souq. ဒါဟာအကျော်ကြားဆုံးဒူဘိုင်းရဲ့ဖြစ်ပါတယ်လက်ဝတ်ရတနာအမျိုးအစားအားလုံးကို၏ကြီးမားသောရွေးချယ်ရေးရာပူဇော်သက္ကာကို souq သွားရောက်ခဲ့သည်။ အဆိုပါမရနိုင်ပါဘူးအပိုင်းပိုင်းနူးညံ့သိမ်မွေ့သောအကွင်းကနေအပြည့်အဝကိုယျခန်ဓာကိုလက်နက်မှတစ်ဦး Stand-ထွက်လက်ရာင့်တလျက်အလားအလာသတို့သမီးများအတွက် Souk စံပြစေသည်အနေနဲ့သာမန်ထက်ဆက်စပ်ပစ္စည်းအထိ သူတို့ရဲ့အထူးနေ့ရက်ကိုမြှင့်တင်ရန်။
ကမ္ဘာ့အပြင်းထန်ဆုံးရွှေလက်စွပ်အတွက်ဖြစ်ပါသည် Najmat Taiba (Taiba of Star) Taiba မှ Gold and Jewellery Co. , Ltd မှ ၀ င်ရောက်ခဲ့သည် ဆော်ဒီအာရေဗျ။ လက်စွပ်ကို 5.17 ကီလိုဂရမ်ကျောက်မျက်ရတနာများဖြင့်တပ်ဆင်သည် Signity ကမ္ဘာ့ဖလားရွှေကောင်စီကထောက်ခံနေတဲ့ 58.686 ကီလိုဂရမ် 21 ကာရက်ရွှေလက်စွပ်ပေါ်တွင်သတ်မှတ်ထားအရှေ့အလယ်ပိုင်းနှင့်, ယူအေအီး 63.856 ကီလိုဂရမ်စုစုပေါင်းအလေးချိန်နှင့်အတူ။ ဟုတ်သည်၊ ရွှေသည်ထာဝရနှင့်ပညာရှိသည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု! ဥစ္စာဓနထိန်းသိမ်းခြင်း၏အနုပညာ: ရှေ
အဆိုပါ Spice Souq ရွှေ Souq ဘေးတွင်တည်ရှိသည်။ အဘယ်အရာကိုဝယ်ခြင်းငှါ? သစ်ကြံပိုး, cardamom, လေးညှင်းပွင့, ရွှေဝါရောင်, လက်ဖက်ရည်နှင့်အများအပြားပိုပြီးနံ့သာများနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်။
ကျနော်တို့လက်ဘနွန်စားသောက်ဆိုင်အကြံပြု Babel ဘို့ ပင်လယ်စာနဲ့ mezze , La မဲများကမှာ Meraas on
Jumeirah 1 အတွက် beachside ဧရိယာ။ အတွက်တဦးတည်းအနားမှာ ဒူဘိုင်း သူတို့အတွက်ခက်မသုံးဖြာများ လေဗနုန်တော အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်တဦးတည်း ကူဝိတ်. အဆိုပါစားသောက်ဆိုင်နှစ်ခုအဆင့်ဆင့်ကိုကျော်ထွက်ချထားကကျယ်ဝန်းကျန်ကြွင်းသောအရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဂရိတ်ဆန်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကို, yummy အစားအစာနှင့်အလွန်ဖော်ရွေန်ထမ်းများ။ သူတို့ဟာကြီးမားတဲ့ပင်လယ်စာ bar ကိုလည်းတစ်ခုမိုးလုံလေလုံထမင်းစားခန်းဧရိယာရှိ။ ကျနော်တို့လသာဆောင် seating အပေါ်ထပ်အပေါ်ခဲ့ကြသည်နှင့်ထိုကဲ့သို့သောပုစွန် Beiruty နှင့်ဒိန်ခဲလိပ်ကဲ့သို့အချို့ mezze ဟင်းလျာများရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါတို့သည်လည်းတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည် complimentary သစ်သီးများနှင့်သကြားလုံး!
စားပွဲတင်ကြိုတင်မှာကြားထား: + 9714419 0220
Babel, La မဲ, ဒူဘိုင်း
24 ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံခရီးစဉ်၏ပုလဲနှင့်အတူဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့နာရီ, ခရီးစဉ်နှင့်ပိုပြီး
သူတို့ရဲ့အီးမေးလ်လိပ်စာပေါ်တိုက်ရိုက်ဟိုတယ်ကိုဆက်သွယ်အခမဲ့ခံစားရကျေးဇူးပြုပြီး: reservations@pearlsofswitzerland.com သငျသညျဒူဘိုင်းမှခရီးစာအုပ်ဆိုင်လိုလျှင်။
သင်ပိုမိုရှာဖွေနေနေတယ်ဆိုရင် ဒူဘိုင်းဟိုတယ်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြည့်ပါ ဘလော့ဂ် ပို့စ်တင်ပြီးယူအေအီးမှာနေမယ် စော်ဘွား.
ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီယခုဒူဘိုင်းတွင်နေထိုင်ဘို့ကောင်းသောလမ်းညွှန်ပေး။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဘို့အသီးအသီးဘာသာစကားကိုသတင်းအချက်အလက်ကိုထည့်သွင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ် ဒူဘိုင်းကျွမ်းကျင်သူများ။ ဒါကြောင့်စိတ်ကို၌ဤအတူသငျသညျယခုတှငျအလမ်းပြသောအကြံပေးချက်များနှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်ရနိုင် အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘာသာစကားနှင့်အတူ။